Wadahadalladii Biyo xireenka Wabiga Niil oo fashilmay | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Wadahadalladii Biyo xireenka Wabiga Niil oo fashilmay
Muqdisho(SONNA):-Wadaxaajoodkii Biyo xireenka Al-Nahda ee u dhaxeysa dalalka, Masar, Suudaan iyo Itoobiya, kana socday Congo, ayaa ku dhammaaday fashil sida ay xaqiijisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Masar.
Intii lagu guda jiray wadahadallada Biyo xireenka Al-Nahda ee Wabiga Niil, ayay dawladaha Masar iyo Suudaan, si wada jir ah ugu edeeyeen dhigooda Itoobiya in shirka ay la yimadeen go’aan ay diideen in ay wax ka badalaan.
Markii uu bilawday muranka Biya xireenkan, dawladda Masar, aya bishii Juun ee la soo dhaafay dacwad ka dhan ah Itoobiya u gudbisay golaha amniga, sida ku xusan Qodobka VI, kaas oo ka hadlaya dejinta khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya wadamadan.
Dr. Zaki Al-Buxeyri oo ah Professor ku takhasusay daraasaadka Afrika ayaa sheegay in Itoobiya ay ka dhiseyso gudahah Niil, 3 biyo xireen oo kale oo aan ka aheyn biyo xireenka Al nahda, kuwaa oo keydin karaan ilaa 200 bilyan oo mitir cubic oo biyo ah, taas oo looga gol leeyahay in laga dhaliyo koronto , si meesha looga saaro Saamiga Wabiga Niil ay ku leeyahiin dalalka Masar iyo Suudaan.
Previous articleQaramada Midoobe oo uga digtay Tanzania inay dib u celiso dadka kasoo qaxay rabshadaha Mozambique
Next articleTaliska Ciidanka Xoogga dalka oo ka warbixiyay howlgaladii u danbeeyay ee gobalka Galgaduud